Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Mba 33 na-ekwupụta mmachibido iwu na mmachi njem ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ogo nke njikwa oke ókè dịgasị iche site na mba ruo obodo, ebe ụfọdụ steeti na-emechi ókèala ha kpamkpam, ebe ndị ọzọ na-emechi usoro nnwale COVID-19 na oke.
The ọhụrụ chọpụtara Omicron ụdị nke coronavirus amanyela ọtụtụ steeti imechi ókèala ha ngwa ngwa na ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọbịbịa si mba ọzọ niile.
N'ịgbalị igbochi mgbasa nke COVID-19 Omicron N'ime mpaghara ha, mba 33 gburugburu ụwa ekwupụtala mmachibido njem njem ma ọ bụ kwalite mmachi njem nke ogo dị iche iche ugbu a.
Ogo njikwa oke ókè na-adịgasị iche site na obodo ruo obodo, yana China, Israel, Morocco na Japan na-emechi oke ha kpamkpam, ebe steeti ndị ọzọ na-emechi naanị usoro nnwale COVID-19 na oke.
Mmachibido iwu mbata mba ofesi zuru oke
China - China enweelarị njikwa oke ala, ebe enwere naanị ụmụ amaala na ndị nwere ikike ibi na obodo ahụ.
Israel - Israel machiri ndị mba ọzọ ịbata obodo ahụ ruo ụbọchị iri na anọ. Ụmụ amaala Israel ga-enwe ike ịlọghachi n'obodo ahụ mana ha ga-anọrọ iche, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na agbachara ya ọgwụ.
Japan - Japan mechiri ókèala ya nye ndị na-abụghị ụmụ amaala otu ọnwa, nke a gụnyere ụmụ akwụkwọ mgbanwe mba ofesi na ndị na-eme njem azụmahịa.
Morocco - Morocco kagburu ụgbọ elu niile na-abata maka izu abụọ.